Warar ku saabsan iPhone | Warka IPhone (Bogga 7)
Barnaamijka Apple Developer wuxuu ku darayaa xoojinta fiidiyaha fiidiyowga
Apple ayaa hadda soo saartay cusbooneysiin cusub oo ku saabsan barnaamijka Apple Developer si loo wanaajiyo isdhexgalka fiidiyowyada, maadaama ay noqon doonto barxadda loo isticmaalo WWDC 2020 ee soo socota
Ciyaaraha iyo waxyaabaha kale ee lagu cabiro ipad-kaaga inta lagu jiro karantiil
Karantiilintu way sii adkaanaysaa, mana diidi doonno. Si kastaba ha noqotee, hadda ma hayno cudurdaar aan uga faa'iideysano ...
Ma "Saxeex la soo gal Apple" xalka walaaca arrimaha gaarka ah?
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan aragnay inta codsi iyo adeeg ee noo ogolaanaya inaan isticmaalno koontadayada ...
CarKey ayaa kusii kordheysa iyada oo ay jirto xanta iyo shaashadaha
Apple waxay sii wadaa tijaabinta tiknoolajiyadda cusub ee loo yaqaan 'CarKey' oo u oggolaan doonta gawaarida in la galo lana bilaabo iyada oo aan loo baahnayn fure
Nomad, shirkadda qalabka, waxay bilaabeysaa soo saarista waji-gashiga
Shirkadda Accessom-ka ee Nomad ayaa billowday soo-saar ballaaran oo waji-gelin ah oo adduunka oo dhan loo soo diri doono si loola dagaallamo COVID-19.
Apple iyo BMW waxay sii wadaan inay ka shaqeeyaan iOS 14 hawsha 'CarKey'
BMW iyo Apple waxay ka shaqeyn doonaan CarKey ee iOS 14, fure xariif ah oo kuu ogolaanaya inaad gawaarida ka furto jeebkaaga.
Safari waxay xannibi doontaa dhammaan cookies-ka dhinac saddexaad
Apple waxay sii wadaa inay ka shaqeyso hagaajinta Safari, hadda waxay u oggolaan doontaa si ahaan inay xannibto dhammaan cookies-ka saddexaad waxayna u dhigantaa Chrome.
IOS 14 waxay ku keeni doontaa warka ku saabsan arjiga Raadinta
Marka loo eego xogaha dhowaan soo baxay, macruufka 14 wuxuu ku keeni doonaa hawlo cusub codsiga Raadinta oo inta badan isticmaaleyaashu ay jeclaan doonaan.
Sida loogu beddelo iPhone-gaaga Dash Cam leh DUBL Drive
Waxaan ku tusineynaa sida aad ugu rogi karto iPhone-kaaga Dash Cam oo leh DUBL Drive, codsi fudud oo aan laga maarmi karin.
Waxay ku kordhin doonaan lacagta bixinta inta aan la xiriirin
Fayraska 'coronavirus' wuxuu horumariyaa tallaabada si loo kordhiyo xadka bixinta iyada oo loo marayo xiriiriye la'aanta Boqortooyada Ingiriiska
Apple waxay xayiraadda ka qaadeysaa iibsashada in ka badan laba iPhone oo isku mid ah
Apple wuxuu tirtirayaa xayiraadda hortaagtay iibsashada in kabadan laba qalab oo isku nooc ah oo kuyaala Apple Online Store oo kuyaala Mareykanka.
Barta shaqsi helitaanka si fiican uma shaqeyneyso laakiin xalka ayaa ku soo socda
Bar marin shaqsiyeed uma shaqeyso sidii la rabay laakiin dhibaatada horay waxaa u ogaa Apple iyadoo xalka lagu jiro
Apple waxay ugu deeqday in kabadan 2 milyan oo waji ah Maraykanka iyo Yurub
Tim Cook wuxuu ku dhawaaqayaa in Apple ay ku deeqi doonto in ka badan 2 milyan N95 waji ah si loola dagaallamo cudurka 'COVID-19 coronavirus' ee Mareykanka iyo Yurub.
Sannadkii uu ipad ka fariistay kombuyuutarka shaqsiga ah
2020 xaqiiqdii waa sanadkii iPadku ka fariistay kumbuyuutarka shaqsiga ah, waana kuwan oo dhan sababaha.
Habka xiisaha leh ee dib loogu cusboonaysiin karo tilmaamaha ay Apple ku soo bandhigtay iPad-ka
Apple waxay heysaa kudar iyo daqiiqado ay kuqoriso jiirka iPad-ka. In kasta oo uu u dooday ...
Logitech waxay cusbooneysiineysaa kiiskeeda Slim Folio Pro waxayna soo saartay jiirka ipadka
Logitech wuxuu bilaabayaa kiiskiisa Slim Folio Pro ee iPad 2020 iyo jiir cusub oo loogu talagalay in lagu isticmaalo ipad ka iPadOS 13.4
Apple TV + wuxuu yareeyaa tayada baahintiisa sababtoo ah coronavirus
Yurub ayaa ku boorisay Apple TV + iyo adeegyada kale inay hoos u dhigaan tayada baahintooda si loo yareeyo culeyska ka imanaya isku xirnaanta.
Apple waxay si weyn ugu deeqaan qalabka caafimaadka ee Talyaaniga
Apple waxay si weyn ugu deeqaan qalabka caafimaadka ee Talyaaniga. Tan iyo bilowgii COVID-19, wuxuu adduunka ugu deeqay in ka badan $ 15 milyan.
Netflix waxay yareyneysaa tayada fiidiyowga ee Yurub
Netflix waxay raacday talo soo jeedinta Midowga Yurub waxayna hoos u dhigtay tayada qulqulka ay bixiso si aysan u dhergin shabakada Yurub.
Waqtiyada dirida si loo helo iPhone ama AirPods ayaa hoos u dhacaya
Apple wuxuu yareeyaa waqtiyada dirista alaabteeda: waxaa laga yaabaa inay ugu wacan tahay hoos u dhaca dalabka ama dib u howlgelinta warshadaha Shiinaha.
Caadadan iPhone 11 Pro waxay ballanqaadaysaa inay iska celinayso COVID-19
Shirkaddu waxay u heellan tahay qaabeynta jiilka cusub ee IPhone-ka waxay ballan-qaadaysaa in qaabkeedu awood u leeyahay inuu iska caabiyo COVID-19 oo uu ammaan kaaga dhigo.
Apple wuxuu daahiyaa sii deynta masraxa ee 'Beastie Boys Story' sababtoo ah coronavirus
COVID-19 wuxuu sababay in IMAX iyo Apple ay baajiyeen hordhaca sheekada Beesti Boys ee tiyaatarada, laakiin hordhacii Apple TV + wuxuu sii ahaanayaa Abriil 24.
Maya, shaandheeyaha hawadu kaa difaaci maayo Coronavirus
Waxay soo saaraan nadiifiyaha hawada ee ugu horreeya ee la jaan qaadi kara HomeKit, haa, haddii aad ka fekerayso iyada oo ah hab ka hortag ah COVID-19 iska ilow ...
Mushaharka ugu badan ee dayactirka farsamayaqaanada Apple illaa Abriil
Apple waxay bixin doontaa inta ugu badan ee suurtagalka ah ee dayactirka ay sameeyeen farsamoyaqaannadu illaa bisha Abriil si looga caawiyo khasaaraha ka dhashay shirkadda 'Covid-19'
Ganaax lacageed oo malaayiin doolar ah oo loogu talagalay shirkadda Apple ee Faransiiska
Apple waxay ku heshay ciqaab malaayiin doolar ah gudaha Faransiiska wakaaladda la dagaalanka kalsoonida. Apple-ka waxay horay u go'aansadeen inay racfaan ka qaataan cunaqabateynta
Processor-ka soo socda ee A14 wuxuu noqon doonaa kan ugu horreeya ee dhaafa 3GHz
Astaamaha processor-ka xiga ee Apple A14 waxay bilaabeen in la sifeeyo, taas oo 30% ka dheereyn karta tan hadda jirta, oo gaareysa 3GHz.
Elon Musk wuxuu ka xanaaqsan yahay tayada hoose ee iOS
Maamulaha guud ee shirkadda 'Tesla' wuxuu umuuqdaa inuusan jecleyn cusbooneysiinta cusbooneysiinta ee iOS-ka wuxuuna aad uga careysnaa waxqabadka Mail.
TSMC waxay diyaarsataa processor 5nm ah iPhone 12
Marka loo eego xogaha ugu dambeeya, TSMC waxay diyaarinaysaa processor oo kaliya 5 nanometer ah iPhone 12, maxay horumarkan macnaheedu noqon lahaa?
Waa kuwan qaabka liiska u ekaan karo shaashadda guriga ee iOS 14
IOS 14 waxay keeneysaa qaab liistada shaashadda guriga oo aan ku heli karno dhammaan barnaamijyada lagu amro isticmaalka ama sida xarfaha isugu xiga.
Dhammaan dukaammada Apple ee adduunka ayaa la xiray marka laga reebo kuwa Shiinaha ku yaal
Shiinaha waa meesha kaliya ee adduunka ee dukaamadiisa ay hada furanyihiin sababo la xiriira cudurka faafa ee coronavirus
Dukaammada Apple ee Spain ku yaal ayaa xirnaa illaa ogeysiis dambe Coronavirus awgeed
11-ka dukaan ee Apple waxay ku yaalliin Spain si ay ula dagaallamaan faafidda cudurka coronavirus ee saameeya waddanka. Ma furi doono illaa ogeysiis dambe
Apple Music waxay cusbooneysiineysaa heshiisyada Universal Music, Sony Music iyo Warner Music
Apple Music waxay cusbooneysiineysaa heshiisyada seddex ka mid ah shirkadaha rikoorka ugu weyn adduunka ku leh: Universal Music, Sony Music iyo Warner Music.
Dukaammada Apple ee ku yaal Talyaaniga ayaa xirmay illaa amar dambe
Apple waxay xireysaa dhamaan bakhaaradeeda jireed ee kuyaala dalka talyaaniga ilaa qeybta uguxun ee cudurka coronavirus uu dhamaado mana jiro taariikh la qorsheynayo in la furo
Apple waxay waydiisaneysaa shaqaalaheeda inay joojiyaan inay noo fidiyaan suurtagalnimada isku dayida Apple Watch ama AirPods iyadoo laga cabsi qabo Coronavirus
U fidinta shaqaalaha Apple Store ee ah inay isku dayaan AirPods ama ay arkaan sida Apple Watch uu noogu habboon yahay way dhammaatay cabsi laga qabo Coronavirus.
Hadda waxaad ku qaadan kartaa leysinkaaga wadista taleefankaaga iPhone-ka miDGT
Codsiga miDGT ee kuu oggolaanaya inaad ku qaadato liisankaaga wadista iyo waxyaabo badan oo ku saabsan iPhone-kaaga ayaa hadda si buuxda looga heli karaa App Store.
Calaamadaha Cusub ee "Caalamiga ah" Dial Imaanaya Iyadoo WatchOS 7
Xogtan cusub ee macruufka ah ee macruufka ah ee macruufka ah ee iOS 14 iyo watchOS 7 waxay tilmaamaysaa soo saarista aag cusub oo loo yaqaan "International" oo wata calammada waddammada oo dhan.
Tani waa sida ay Apple u rabto taleefankeeda isku laabma, ma jeceshahay?
Apple waxay xiraysaa fikradeeda ah iPhone-ka la laaban karo waxayna calaamadeyn kartaa ka hor iyo ka dib taleefanka gacanta.
Apple News waxay u jeesaneysaa daboolida gaarka ah ee macluumaadka Coronavirus
Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabeen qayb gaar ah Apple News si ay u ururiyaan wax kasta oo khuseeya faafitaanka degdegga ah ee walwalka Coronavirus.
Wax walba waxay muujinayaan in Apple AirTags ay isticmaali doonaan baytariyada badhanka
Daadinta ugu dambeysa waxay diirada saareysaa baytariyada CR2032 ee horay loogu isticmaalay aaladaha la midka ah sida kuwa Tile brand.
Beta-kii shanaad ee iOS 13.4 ayaa imanaya iyo inbadan
Aynu ku raaxaysanno sii deynta beta-shanaad ee iOS 13.4 iyo iPadOS 13.4 ee loogu talagalay horumariyeyaasha oo ay weheliyaan inta kale ee ka kooban.
Powerbeats 4: Batariga ayaa noqon doona bartaada adag
Aragti ahaan waxaan leenahay dagaal wanaagsan oo alaab ah oo ka socda shirkadda Cupertino oo dhowaan gaari doonta suuqa. Weli waa…
IOS 14 ayaa ogolaan doonta soo dejinta waraaqaha dhinac saddexaad ah waxayna la jaan qaadi doontaa AliPay
Qarxinta macruufka 'iOS 14' ayaa sii socota oo hadda waxaan ognahay wararka marin u helka, Apple Pay iyo suurtagalnimada soo dejinta waraaqaha
IOS 14 waxay u keeni doontaa bog cusub shaashadda guriga ee iPhone-ka iyo iPad-ka oo wata liisaska codsiyada iyo soo-jeedimaha Siri.
IOS 14 waxay muujineysaa iPhone 9, iPad Pro cusub, AirTags iyo qalab cusub oo loogu talagalay Apple TV
IOS 14 waxay muujineysaa xogta ku saabsan iPhone 9, iPad-ka cusub, Apple TV cusub oo leh aaladda hagta cusub, iyo AirTags oo imaan lahaa guga.
Shaqada cusub ee OCR ee iOS 14 ayaa aqoonsan doonta waxaad ku qortay qalinka Apple
IOS 14 waxay aqoonsan doontaa qoraalka aan kuqorno qalinka Apple-ka ipadkeena waxayna u badalaysaa qoraal, sidii oo aan qortay.
Daadinta macruufka ee iOS 14 waxay muujineysaa sida sameecadaha dhagaha sare ee Apple ay u ekaan karaan
Dareemida macruufka 'iOS 14' ayaa muujineysa astaanta waxa noqon kara xiga, dhagaha cusub ee cusub ee cusub ee cusub ee Apple.
iPadOS 14: Xakamaynta Mouse ee la Kordhiyay iyo Kiiboodhadhka Cusub ee Trackpad
iPadOS 14 - Kordhinta xakamaynta jiirka iyo kumbuyuutarrada cusub ee trackpad. Koodh ka yimid wajigii hore ee iPadOS 14 ayaa la helay waana tan la ogaaday.
Bandhigyada Mini-LED-ka ayaa xukumi doona sii deynta soo socota ee Apple
Apple waxay diyaar u tahay jiilkeeda cusub ee shaashadaha yaryar ee loo yaqaan 'mini-LED screens' waxayna lahaan kartaa wadar ahaan lix shey oo leh shaashadda noocaan ah ee cusub
Apple TV + waxay cusbooneysiineysaa 'True Be Told' xilli ciyaareed labaad
Apple TV + ayaa dib loo cusbooneysiiyay xilli ciyaareedkii labaad mid ka mid ah taxanihii ugu horreeyay ee asalka ah si loo arko iftiinka: Runta ha loo sheego.
Cabsida Coronavirus waxay galeysaa xudunta xarunta Apple, shirkadu waxay joojisaa shirarka iyo shirarka waaweyn
Degmada Santa Clara County waxay weydiisaneysaa shirkadaha Cupertino sida Apple inay joojiyaan shirarka iyo shirarka tiro badan oo kaqeybgalayaasha ah Coronavirus darteed.
Apple Pay waxay imaneysaa Mexico waqti aad u dhow
Apple Pay waxay si dhaqso leh ku imaaneysaa Mexico sidaa darteed waa waqti fiican oo aad si qoto dheer u ogaatid nidaamka lacag bixinta ee Apple ee aan lala xiriirin.
"Hey Spotify", kaaliyaha codka ee aan macquul ahayn ee uu Spotify ka shaqeeyo
Soo-saare ayaa helay tixraacyo a "Hey Spotify" qaab caawiye kaaliyaha dalwaddii ee koodhka ilaha tanina runtii waa war aad u xun.
Wozniak waxay sheeganeysaa in CDC ay diiday inay ka baarto coronavirus
Maalmo ka hor, aasaasaha Apple Steve Wozniak ayaa soo dhigay qoraal uu ku qoray "Bukaanka…
Saamiga hoose ee iPad Pro: natiijada coronavirus ama moodello cusub?
Kaydka IPad Pro wuxuu ku sii dhacayaa adduunka intiisa badan, in kasta oo aan la ogeyn haddii ay tahay sababta oo ah iPads cusub ayaa imanaya ama saamaynta cudurka coronavirus COVID19.
Apple waxay kula talisaa qaybiyaasha qaar in badalashada iPhone ay dib udhacdo Coronavirus awgeed
Bloomberg waxay ka digeysaa in Apple ay kordhineyso waqtiyada bedelka qalabka sababo la xiriira yaraanta ay ku hayaan cudurka Coronavirus.
Apple ma xaadiri doonto xafladda SXSW sababo la xiriira coronavirus
Apple ma xaadiri doonto xafladda SXSW sababo la xiriira coronavirus. Bandhig lagu qabto sanad walba Austin, Texas, oo loogu talagalay muusikada, filimka, TV-ga, iyo tikniyoolajiyadda.
Waxay xadaan ipad waxayna la kulmaan shil qasaaro gaystay iyadoo lagu eryanayo "Find My"
Shil dhimasho ah oo ka dhacay bartamaha booliis oo lagu dabaqay arjiga "Raadi" iPad-ka la xaday ee ah halyeeyga.
Apple waxay iska ilaalinaysaa inay shaqaalaheeda u dirto Talyaaniga iyo Kuuriya sababo la xiriira coronavirus
Maanta laga bilaabo shaqaaluhu uma safri doonaan Talyaaniga ama Kuuriya si ay u gutaan shaqooyinka la xiriira shirkadda waddooyinka kalena waa la dallacayaa.
Disney +: waxa ku jira, qiimaha iyo helitaanka Spain
Disney + ayaa timid Spain. Waxaan kuu sheegeynaa sida adeegga qulqulka cusub uu u shaqeeyo, buugiisa iyo sida ugu jaban ee loo soo bandhigo.
Falanqeeyayaasha qaarkood waxay ka hadlaan iibka weyn ee iPhone 12 ee soo socda uu yeelan doono
Falanqeeyayaasha qaarkood waxay bilaabayaan inay ka hadlaan in iPhone 12 ee soo socda uu yeelan karo mug weyn oo iib ah sababtoo ah wareegyada cusbooneysiinta qalabka.
Oppo sidoo kale waxay ku sifeeysaa Apple Watch qalabkeedii ugu dambeeyay ee smartwatch
Oppo's smartwatch-ka cusub wuxuu si la yaab leh ula mid yahay Apple Watch xitaa heerka software-ka waxaana lasoo bandhigi doonaa 6-da Maarso.
iPad iyo MacBook, goorma ayuu mid waliba u qalmaa?
Haddii aad ka fekereyso inaad u soo iibsato wax soo saarka Apple nolol maalmeedkaaga, waxaad bilaabi kartaa inaad la yaabto inta u dhexeysa MacBook iyo iPad, waxaan kaa caawinaynaa inaad doorato.
Apple wuxuu bilaabayaa Beta afaraad ee iOS 13.4 iyo aalado kale
Apple waxay soo saartay Beta afaraad ee iOS 13.4, iyo sidoo kale iPadOS, tvOS iyo macOS, iyagoo nagu soo dhaweynaya nooca ugu dambeeya ee imaan kara bishan.
Xaaladda mugdiga ah ee 'WhatsApp' ayaa hadda la heli karaa
Ugu dambeyntiina, WhatsApp ayaa durba billowday qaabka mugdiga ah ee codsigeeda iPhone iyadoo loo marayo cusbooneysiin dhow.
Apple waxay u dirtaa xirmo hadiyadeed shaqaalaha ay hayaan Wuhan coronavirus
Apple waxay u dirtaa xirmo gargaar shaqaalaha si karantiil looga dhigo gobolka Wuhan iyo Wenzhou sababo la xiriira COVID-19 Coronavirus
Apple wuxuu si dhuumaaleysi ah ugu socdaa taxanaha Jabbaan si uu ugu dhiirrigeliyo Mac bar cusub
Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabeen meel cusub Behind The Mac oo ay ku maareeyaan inay si dhuumaaleysi ah ku qaataan Laptops Mac taxane caan ah oo Japan ah.
Tim Cook wuxuu ku tiirsan yahay Shiinaha si loo xakameeyo saameynta coronavirus
Wareysi ay Fox Business la yeelatay agaasimaha Apple Tim Cook, wuxuu miiska saaray rajada laga qabo Covid-19 madaxa astaanta.
Lady Gaga waxay bilawday Jacayl Doqon ah, halkeeda cusub oo ay ku duuban tahay muuqaal fiidiyoow ah oo ay la socoto iPhone 11 Pro
Lady Gaga ayaa si lama filaan ah u bilawday Jacayl Doqon ah, iyada cusub oo ay ka mid tahay muuqaal fiidiyow ah oo lagu duubay iPhone 11 Pro gudaha ololaha #ShotOniPhone
Apple iyo patent-keeda gaarka ah ee kuraasta gawaarida
Xanta ayaa soo laabatay, shirkadda Cupertino waxay sharciyeysay nidaam elektaroonig ah oo xiiso leh kuraasta gawaarida.
Apple waxay dooneysaa inay joojiso iibinta App Store Confidential, buuga sirta ee Apple
Ragga ka socda Cupertino waxay isku diyaarinayaan inay suuqa ka saaraan buugga App Store Confidential, buugga sirta ah ee ku jira Apple app store.
Apple waxay diyaarisaa qalab dib u soo celinta iyada oo aan loo baahnayn kombiyuutar
Dhowr saacadood ka hor Apple ayaa soo saartay Beta saddexaad ee macruufka 13.4, nooc cusub oo ay ku jiraan qaar ka mid ah wararka qarsoon ee muhiimka ah ...
Gelitaanka ayaa si xaqiiqo ah u dilaya soo dejinta muusikada
Kobaca qulqulka muusikada lama joojin karo oo soo degsashada dhijitaalka ah waxay ku noolyihiin xilliyadoodii ugu dambeysay nolosha.
Apple waxay kireysaa meel xafiis weyn ku leh New York
Apple waxay balaarineysaa boosaska xarumaheeda magaalada New York
Disney + waxay soo bandhigtay dalab soo jiidasho leh oo loogu talagalay diiwaangelinteeda sanadlaha ah
Disney + ayaa kuu oggolaan doonta inaad iibsato sanad dhan 59,99 euro oo keliya haddii aad isdiiwaangeliso ka hor 23-ka Maarso.
Apple waxay isu diyaarineysaa inay hagaajiso (xitaa ka sii badan) amniga Safari bisha Sebtember
Apple ayaa layaab ku dhawaaqday isbeddelka Safari si loo wanaajiyo asturnaantaada waxayna aqbali doontaa oo keliya shahaadooyinka HTTPS ee kayar 13 bilood.
Kiis dacwo ah oo loogu talagalay iPad Pro cusub ayaa muujinaya qayb kamarad laba jibaaran
Sawirka waxa u noqon kara kiis cusub iPad Pro 2020, wuxuu ina tusayaa sida moduleka kamaraddu u noqon doono afargeesle, sida kan iPhone 11 Pro.
WhatsApp ee Xaaladda Mugdiga ah ayaa hadda laga heli karaa Beta-ka loogu talagalay macruufka
WhatsApp horeyba waxay u leedahay qaab mugdi ah oo laga heli karo dadka isticmaala kuwaas oo tijaabinaya Beta iyada oo loo marayo TestFlight, oo lagu dhajiyay iOS 13
Maya, barnaamijyada rukunka ma ahan nidaam wanaagsan
Maya, codsiyada bixinta rukunka maahan mustaqbalka, xumbadaas ayaa qarxi doonta aniguna waan kuu sheegi doonaa sababta ay u dhici doonto.
IOS iyo iPadOS 2 Beta 13.4 Hada Waxaa Loo Heli Karaa Horumariyaasha
Shirkadda Cupertino waxay go'aansatay inay sii deyso beta-ka labaad ee iOS iyo iPadOS 13.4 kuwa horumariya.
Soosaarida aaladaha Apple ayaa u wareegaya Shiinaha una wareejinaya Taiwan
Soosaarka dhowr alaabood oo Apple ah ayaa u guuraya Taiwan si ay isugu dheellitiraan wax soo saarka hooseeya ee Shiinaha sababo la xiriira Covid-19
Gmail ee macruufka ayaa hadda ku dareysa Siri Shortcuts
Hadda Gmail-ka loogu talagalay macruufka wuxuu ku daray taageero buuxda Siri Shortcuts tanina waxay u badan tahay inay noloshaada kuu fududeyn doonto.
Xaqiiqda ka dambeysa cimri dhererka taleefannada "laalaabka"
Samsung Galaxy Z Flip-ka cusub ayaa markale ku beeray shaki dhanka adkaysiga, wajiga qarsoon ee taleefannada isku laaban.
Shuruudaha iPad-ka cusub ee cusub ayaa sii dheeraan kara
Sida muuqata iPad-ka cusub ee Pro waxaa la soo bandhigi doonaa bisha Maarso, laakiin waqtiyadeeda bixinta waxaa la kordhin doonaa ugu yaraan hal bil oo dheeraad ah dhibaatooyinka ka jira Shiinaha.
WhatsApp wuxuu gaaraa laba bilyan oo isticmaale adduunka
WhatsApp ayaa ku dhawaaqday inay gaareen labo bilyan oo isticmaaleyaal ah adduunka oo dhan, ka dib markii uu kordhay koritaanka sanadihii la soo dhaafay.
Shirkadda Geesiyaasha, ciyaartii ugu dambeysay ee tayada leh ee soo socota iPad-ka
Shirkadda Halyeeyada, guul istiraatiijiyad dagaal oo aad u xiiso badan oo si rasmi ah u gaadhay iPad-ka oo ay ku farxeen dadka isticmaala.
Coronavirus wuxuu dib u dhigi karaa soosaarka iPhone 12 wax ka badan iPhone 9
Coronavirus wuxuu dib u dhigi karaa soo saarida iPhone 12 wax ka badan ta iPhone 9. Tijaabooyinkii ugu dambeeyay ee iPhones 12 waa la daahiyay.
Shirweynihii adduunka ee mobilka ayaa la joojiyay
Dhamaadka, saadaalinta badankeeda waa la fuliyay waxaana la baajiyay Shirweynihii Dunida ee Mobilka sababo la xiriira fayraska coronavirus, oo sidoo kale loo yaqaan Covit-19
Apple waxay garaaci kartaa 100 milyan oo AirPods ah sanadka 2020
Apple waxay ka heshay xididka muhiimka ah AirPods waxayna ujeedadeedu tahay inay gaaraan 100 milyan oo unug oo la iibiyay sanadka 2020.
Lifx waxay gabi ahaanba dib u naqshadaynaysaa codsigeeda warar xiiso leh
Haatan Lifx waxay cusbooneysiisay arjiga iyadoo dib u habayn buuxda lagu samaynayo istcimaalka isticmaalaha inkasta oo la ilaalinayo nuxurka.
Fikraddaani waxay muujineysaa dib-u-qaabeyn xoog leh oo iPadOS-ka badan
Fikrad cusub ayaa dib u qaabayn ku samaynaysa sida aan u fahmayno hawlaha badan ee iPadOS: menusyada macnaha guud leh oo leh awood dareen badan leh.
Coronavirus wuxuu horey u saameeyay dhirta Foxconn iyo Apple
Foxconn waxay xuddun u tahay howlaheeda Shiinaha iyo soo saarista wax soo saarka Apple waxaa saameyn ku leh cudurka loo yaqaan 'coronavirus'.
Qiimaha IPhone 9 wuxuu noqon karaa $ 399
Qiimaha IPhone 9 wuxuu noqon karaa $ 399. Waxaa la bilaabi doonaa rubuca koowaad, iyadoo kuxiran dib udhaca soosaarka maadada Coronavirus.
Sida loo demiyo aragga otomaatiga ah ee Netflix
Hadda Netflix ayaa ugu dambeyntii go'aansatay inay dhageysato bulshada sidaasna noo oggolaato inaan joojino aragtida, waxaan ku tusi doonaa sida.
LG waxay xaqiijineysaa in Dolby Atmos uu ugu dambeyn imanayo Apple TV
Sidaad sifiican u ogtahay, telefishanno badan oo LG ah oo heer sare ah ayaa bilaabay inay helaan arjiga Apple TV iyo sidoo kale iswaafajinta ...
Apple ayaa ganaax lacageed ku soo rogtay dowlada Faransiiska kadib markii ay ka gaabisay taleefannada iphone-ka duugga ah
Apple ayaa ganaax lacageed ku soo rogtay dowlada Faransiiska kadib markii ay ka gaabisay taleefannada iphone-ka duugga ah. Waxay heshiis la gaareen dacwad oogaha Paris waxayna bixin doonaan 25 Milyan oo Euro
Apple waxay kordhisay xiritaanka xafiisyadeeda iyo dukaamada ay ku leedahay Shiinaha sababo la xiriira Coronavirus
Ragga ka socda Cupertino waxay kordhiyeen xiritaanka dukaamada iyo xafiisyada ay ku leeyihiin Shiinaha sababo la xiriira Coronavirus-ka ugu horrayn illaa Febraayo 13.
Khariidadaha Google ayaa u dabaaldegaya 15-kii sano ee la soo dhaafay
Khariidadaha Google waxay u dabaaldegaysaa sanad-guurada shan iyo tobnaad iyada oo dib loo naqshadeeyay astaanteeda iyo nooc cusub oo barnaamijkeeda ah oo leh shaqooyin cusub oo muhiim ah.
Apple waxay rabtaa inaad awood u leedahay inaad isticmaasho iPhone-kaaga halkii aad ka isticmaali lahayd furaha gaariga ee NFC
Apple waxay rabtaa inaad awood u leedahay inaad isticmaasho iPhone-kaaga halkii aad ka isticmaali lahayd furaha gaariga ee NFC. Fur, fur oo xir, sida furayaasha casriga ah ee hadda jira.
NYPD waxay ka socotaa buuga xusuus qor illaa iPhone
Tani waa sida NYPD ay u go'aansatay inay ka tagto xusuus-qor dhaqameedka gadaashiisa una wareejiso iPhone iyada oo loo marayo codsigeeda.
Kuwani waa warka macruufka 13.4
Apple waxay soo saartay Beta-kii ugu horreeyay ee iOS 13.4 saacado yar ka hor, waxayna sameysaa warar xiiso leh, qaar lama filaan ah
Spotify waxay laban laab ka badantahay macaamiisha Apple Music
Spotify waxay ku dhawaaqday imaatinka 124 milyan oo isticmaaleyaal ah, in ka badan labanlaabka macaamiisha Apple Music heysato.
iCloud.com waxay hagaajisay shaqooyinkeeda haddii aad ka soo gasho macruufka ama Android
Websaydhka iCloud.com wuxuu hagaajiyay shaqooyinkiisa haddii aad ka soo gasho macruufka ama Android. Hadda waxaa jira adeegyo badan oo Apple ay ku bixiso iCloud.com oo ka socota Android.
'Quest Quest: Raven's Banquet' Riwaayad Qosol Badan Oo Laga Helay Apple TV +
Quest Mystic: Raven's Banquet waa taxane cusub oo majaajilo ah oo loogu talagalay Apple TV +. Waxaa la sii deyn doonaa Febraayo 7 oo leh 9 qaybood oo 30 daqiiqo ah.
Google waxay siisaa horumariyeyaasha kala bar inta ay bixiso Apple
Google waxay horey u siin laheyd horumariyeyaasheeda qiyaastii $ 80.000 bilyan tan iyo markii la bilaabay, kala bar lacagta Apple.
Alaab-qeybiyeyaasha Apple ayaa la filayaa inay dib u bilaabaan wax soo saarkii Shiinaha 10-kii Febraayo
Waa macquul in bisha soo socota ee Febraayo 10 shirkadaha ugu waaweyn ee Apple iyo shirkadaha kale ee Shiinaha ay dib u bilaabi doonaan shaqadooda
Isticmaalayaasha Kaararka Apple hadda waxay u dhoofin karaan dhaqdhaqaaqyadooda barnaamijyada miisaaniyadda
Apple waxay dhaqaajineysaa suurtagalnimada dhoofinta dhaqdhaqaaqyada aan ku sameyno kaarka Apple si aan ugu adeegsanno barnaamijyada maareynta dhaqaalaha iyo miisaaniyadda.
Khariidadaha Khariidadaha Google oo sababi ciriiri taraafiko meel kasta oo aad rabto
Ninkan oo lagu magacaabo Simon Weckert wuxuu ku fikiray inuu 99 taleefoon gacmeed ku dhejiyo gaari-gacan oo uu ku dhex maro waddooyinka magaalada Berlin taasoo keentay "ciriiriga waddooyinka".
Sida laga soo xigtay Kuo sahayda iphone-ku waxay hoos u dhici doonaan 10% sababo la xiriira Coronavirus
Sida laga soo xigtay Kuo, sahayda iphone-ka ayaa hoos u dhici doonta 10% sababo la xiriira Coronavirus. Wuxuu ku qiyaasayaa in 36 ilaa 40 milyan oo unugyo ka yar la sameyn doono.
Apple waxay xirtaa dukaamada ay ku leedahay Shiinaha sababo la xiriira Wuhan coronavirus
Apple waxay xaqiijineysaa xiritaanka dukaamada, xarumaha saadka iyo xafiisyada Shiinaha sababo la xiriira adkeysiga Wuhan coronavirus.
Bil la adeegsanayo nuqulada AirPods, ma u qalantaa?
Suuqa ku dayashada alaabada iyo qalabka Apple waligiis wuxuu lahaa xidid aad u badan, badanaa kiisaska, fiilooyinka, iwm badanaa waa been abuur.
Tufaaxa Apple Ka Tirinta Xnor.ai Wadashaqeynta Mashruuca Maven ee Pentagon
Iibsashada Xnor.ai ee Apple waxay ka dhigan tahay joojinta qandaraaska Pentagon-ka Mareykanka ee kaqeybgalka mashruuca Maven.
Natiijooyinka rubucii maaliyadeed ee ugu yaabka badnaa ee Apple
Waxaan kuu soo qaadaneynaa faahfaahinta ugu xiisaha badan ee ah in rubuc maaliyadeedkii ugu horreeyay ee Apple ay naga tagtay xagga natiijooyinka iibka.
Diiwaangeli dakhliga u xirashada Apple ee rubuca hore ee 2020
Diiwaangeli dakhliga ka soo gala dharka Apple ee rubuca hore ee 2020. Waxay ka badan yihiin 7.000 milyan oo doolar iyada oo ay ugu wacan tahay Black Friday iyo Christmas.
Loolanka 'Bisha Wadnaha' wuxuu imanayaa Apple Watch bishii Febraayo
Apple ayaa ku dhawaaqday in Bisha Wadnuhu ay u imanayso Apple Watch iyada oo loolankeedu yahay helitaanka billad sharaf iyo istiikiirad shaqsiyeed.
Documentary 'Beastie Boys Story' oo Imaanaya Apple TV + Abriil
Bishii Abriil 24, dukumiinti ku saabsan kooxda New York ee Beastie Boys oo ay la socdaan Mike Diamond iyo Adam Horovitz maaddaama ay dunta guud ka soo degayso Apple TV +
Apple ayaa lagu helay dambi ah inuu ku xadgudbay shatiyada shirkadda WiLan
Apple waxay heshay jawaabta codsiyadeeda iyo qadarka ay tahay inay ku siiso WiLan waxyeelada ka soo gaadhay hantidiisa aqooneed waxay gaaraysaa 85 milyan oo doolar.
Apple si ay ugu deeqdo kooxaha gargaarka ee la xiriira Wuhan coronavirus
Tim Cook ayaa ku dhawaaqay in Apple ay ugu deeqi doonto lacag aad u fara badan kooxaha gargaarka si loola dagaallamo cudurka Wuhan coronavirus.
Tim Cook wuxuu rumeysan yahay in mustaqbalku uu yahay mid xaqiiqada lagu kordhiyey iyo tiknoolajiyad loo adeegsado caafimaadka
Maamulaha Apple Tim Cook wuxuu leeyahay mustaqbalka tikniyoolajiyaddu waxay kujirtaa isgoyska teknolojiyadda, daryeelka caafimaadka iyo xaqiiqda la kordhiyay.
Apple miyuu boos ka la’yahay Apple Park si uu u kireeyo dhisme dhan?
Apple waxay kiraysaa dhisme xafiis qaab-saddex-gees leh oo ku ag yaal Apple Park. Dhismahan waxaa horey u kiraystay shirkaddu sanadkii 2012
Apple wuxuu tixgelinayaa inuu abuurayo qoraallo asal ah oo taxane ah
Sida laga soo xigtay warbixin ay soo saartay shirkadda caanka ah ee Bloomberg, Apple wuxuu tixgelin doonaa abuuritaanka asalka asalka ah ee TV-ga Apple TV +
IPhone 11 Pro uma muuqato inuu la socdo CarPlay qaar ka mid ah BMW-yada
IPhone 11 Pro uma muuqdo inuu la jaan qaadayo CarPlay laga heli karo labada BMW Mini iyo 1 Taxanaha isla soo saaraha.
Kaamiradda iPhone 11 waxay ku sii jirtaa kalabar DxOMark
DXoMark waxay go'aansatay inay 109 dhibcood siiso iPhone 11, oo si cad loo ciqaabay la'aanta muraayadaha taleefanka, ma u malaynaysaa in falanqaynta ay sameeyeen ay tahay mid caddaalad ah?
Muusikada Amazon ee fiirinta Apple Music ee liiska
Amazon Music, oo hadda gaartay 50 milyan oo isticmaale oo aad ugu dhow tirooyinka shirkadda Cupertino.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheeganeysa in shirkadda Apple ay baajisay sirta ku kaydsanayd iCloud si looga fogaado waxyeelo ay u gaysato FBI-da
Apple ayaa hakisay keydinta kaydinta iCloud si ay u muujiso inay diyaar u yihiin inay iskaashi ka yeeshaan baaritaanka dowladda
Yaab! Disney + waxay rajeyneysaa in lagu soo bandhigo Spain
Adeegga Disney + ee loo qorsheeyay inuu soo baxo 30-ka Maarso ayaa taariikhda rasmiga ah u gudbiyay si ay ugu farxaan dadka isticmaala.
Apple kumuu tuuro tuwaalka shukumaanka Touch ID
Apple uma muuqato inuu ku tuurayo shukumaanka taabashada 'Touch ID' taleefannadiisa qaaliga ah wuxuuna wali isku dayayaa inuu ogaado sida loogu daro.
Muraayadaha Apple ma lahaan karaan kaamirooyin laga saari karo iyo sameecadaha dhagaha?
Apple waxay ku dari kartaa aalado dheeri ah Muraayadaha Apple-ka sida samaacadaha dhagaha ama lakab la isku hagaajin karo si loogu badalo macluumaadka la gelinayo dareemayaasha.
Kala duwanaanta iPhone 11 ee Apple ayaa ahayd badeecada ugu iibinta badan Kirismaska
Toddoba ka mid ah tobankii iphone ee lagu iibiyay Mareykanka intii lagu jiray xilliga Kirismaska ​​waxay ahaayeen 11ka nooc, tusaale cad oo ah sida ay shirkaddu u sii socoto.
Meryl Streep si ay ugu dhawaaqdo muuqaalka animation-ka cusub ee Apple TV +
Apple TV + wuxuu sii deyn doonaa filim animation cusub ah oo ku saleysan buuga "Halkan Waxaan joognaa: Ogeysiisyada Nolosha Planet Hearth" oo sheekeygu noqon doono Meryl Streep.
IOS 13.3.1 beta 2 waxaa ka mid ah ikhtiyaar lagu kala goynayo goobta loogu talagalay qalabka ballaadhan ee ballaadhan
Apple waxay u oggolaan doontaa in la jaro meesha ay ku taal iPhone 11 agagaarka qaybta ugu dambeysa ee nooca ugu dambeeya ee iOS 13.3.2.
Apple ayaa Kordhisay Xiisadiisa Sirdoonka Artifishalka ah Iibsiga Xnor.ai
Apple waxay iibsatay Xnor.ai, oo ah shirkad bilow ah oo u heellan soo saarida logarithms wax ku ool ah oo aan ku xirnayn daruuraha inuu shaqeeyo.
Waxay ka dacweeyaan Apple oo ku eedeynaya "Adeeg" khayaanada
Waxay ka dacweeyaan Apple oo ku eedeynaya "Adeeg" khayaanada. Waxay u egtahay wax badan filimka "Runta ku saabsan Emanuel" oo la sii daayay 2013.
Dukaanka App weli waa kan ugu fiican uguna faa'iidada badan
Dukaanka App wuxuu sii wadaa inuu bixiyo natiijooyin dhaqaale oo ka wanaagsan kan Google Play Store, laakiin labaduba waxay ku koraan dakhliga sanadka 2019.
Apple TV + si loogu soo bandhigo waxyaabo cusub SXSW Film Festival 2020
Apple waxay ku soo bandhigi doontaa seddex mashruuc oo cusub Apple TV + asal ah SXSW Film Festival 2020 oo ka dhici doonta Texas (Mareykanka) bisha Maarso.
Trump wuxuu riixayaa Apple inay furaan taleefannada Pensacola iPhones
Madaxweynaha Mareykanka ayaa Apple ku cadaadiyey inuu ka caawiyo furitaanka iphone-yada la xiriira Pensacola Killer
Kuwani waxay noqon karaan afarta nooc ee iPhone-ka ah ee aan arki karno 2020
Apple waxay diyaarin laheyd afar nooc oo iPhone ah sanadkaan 2020. Dhamaantood waxay la socdaan shaashadda OLED iyo isku xirnaanta 4G oo leh ilaa 6 GB oo RAM ah.
Muranka u dhexeeya Apple iyo FBI-da waxba kamuu qaban faallo mooyee
Apple waxay diyaarinaysaa waaxdeeda sharciga si ay u wajahdo FBI-da iyo Xeer Ilaaliyaha Guud ee Mareykanka kiiskan la xiriira qaraxii Pensacola.
Iskaashiga Apple ee weerarkii argagixiso ee Pensacola waa wadar
Apple waxay xaqiijinaysaa si firfircoon oo isdaba-joog ah inay la shaqeyneyso mas'uuliyiinta kiiska dilka argagixisada Pensacola
Apple ayaa hadda sii deysay nooca beta-ka labaad ee iOS 13.3.1
Apple ayaa hadda sii deysay nooca beta-ka labaad ee iOS 13.3.1. Waxay ahayd bil tan iyo markii dadka Cupertino ay bilaabeen beta shirkadooda. Maanta waxay leeyihiin.
Apple waxay soo bandhigi kartaa nooc ka mid ah 2-inch iPhone SE 5.4 oo leh Face ID
Apple waxaa laga yaabaa inay soo bandhigto nooc ka mid ah 2-inch iPhone SE 5.4 oo leh Face ID. MacOtakara ayaa farta ku fiiqday. Iyadoo aan lahayn Aqoonsi Taabasho iyo cabir la mid ah iPhone 8.
Cusbooneysiinta ku saabsan AirPods Pro waxay ka dhigeysaa baajinta buuqa mid ka sii daraya
Sida muuqata cusbooneysiintii ugu dambeysay ee AirPods Pro ayaa sii xumeeysay tayada joojinta dhawaaqa taasna waxay ka careysiisay isticmaaleyaal badan.
Apple Watch wuxuu mar kale hagaajiyaa nolosha isagoo uga digaya reer Brazil cudurka tachycardia
Apple Watch wuxuu ogaadaa laxanka la jaanqaadi kara tachycardia qof reer Brazil ah oo isla markiiba aaday qolka xaalada deg deg ah si ay u qiimeeyaan dhakhaatiirta.
Yurub waxay ku adkeysaneysaa USB-C, Apple wuxuu ku dhegan yahay hillaaca
In kasta oo digniintaas ay ka timid mas'uuliyiinta Yurub, haddana Apple waxay ku sii adkaysaneysaa inay difaacayso dekeddeeda Danab.
Apple waxay dooneysaa inay joojiso soo saarista walxaha ka socda Dhulka waxyaabaha ay ka kooban tahay
Apple waxay dooneysaa inay ka joojiso waxyaabaha macdanta ka soo saara dhulka wixii ka kooban. Robotka Daisy ayaa 200 oo iPhone oo duug ah kala firdhiya saacad kasta si dib loogu warshadeeyo.
Oprah Winfrey ma ahan hada soo saare fuliya filimka Dick iyo Ziering ee Apple TV +
Oprah Winfrey ma ahan hada soo saare fuliya ee filim ka tarjumaya dhibaataynta galmada ee loo geysto warshadaha muusikada todobaadyo ka hor intaan si rasmi ah loo sii deyn.
iPhone SE 2 (ama iPhone 9), wax kasta oo aan ilaa hadda ognahay
Apple waxay gacanta ku heyn kartaa daabacaadda labaad ee iPhone SE waxaanan kuu soo qaadaneynaa isku-darka wax kasta oo aan illaa iyo hadda ka ognahay.
Apple wuxuu bilaabayaa barnaamijka beddelka Kiisaska Battery Smart ee iPhone XR, XS iyo XS Max
Barnaamij beddelaad ah ayaa loo bilaabay kiisaska Battery Smart-ka ee la jaan qaadaya iPhone XR, XS iyo XS Max oo lahaa dhibaatooyin xagga lacag-bixinta ah.
Heerka cusub ee Bluetooth LE Audio, mustaqbalka AirPods wuxuu yeelan doonaa ismaamul dheeri ah
Heerka cusub ee Bluetooth LE Audio, AirPods mustaqbalka waxay yeelan doonaan madax-bannaanidooda. Codka wanaagsan ayaa lagu gudbin doonaa xogta 50% kayar.
Ustaraaliya wali waxay ubaahantahay dhamaan caawinaada suurtagalka ah Applena waxbadan ayey kusoo kordheysaa
Deeqaha ayaa hadda ka furan websaydhada Apple ee Australia iyo Mareykanka, si looga caawiyo dabka saameeya dalka
Tufaaxa Apple ayaa si aad ah u kori doona 4-ta sano ee soo socota
Dharka Apple xiran, oo ay ku jiraan Apple Watch iyo AirPods, ayaa si isdaba joog ah u kori doona 4-ta sano ee soo socota.
Shatiyadaha cusub waxay muujinayaan sida qalinka Apple ee soo socda u horumarin karo
Shati cusub oo laga helay Apple ayaa muujineysa sida qalinka ku xiga ee Apple loo horumarin karo, iyadoo tilmaamo cusub oo taabasho ah lagu xakameynayo howlaha badan.
Apple ayaa lagu soo waramayaa inay bilawday inay iskaan u qaado sawirada iCloud ee sawirada qaawan ee caruurta
Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabeen inay sawirro isku mid ah ka qaadaan Sawirada iCloud ee loogu talagalay sawir-gacmeedka carruurta iyo waxyaabaha ku xadgudubka carruurta.
Fikradani waxay muujineysaa naqshadeynta barnaamijka xakamaynta otomaatiga guriga
Fikradani waxay muujineysaa codsi xakamaynta otomaatiga guriga ah dhammaan alaabooyinka la jaan qaada tiknoolajiyaddan: la habeyn karo, dareen leh oo casri ah.
Ma maalgelin karaa moobilkeyga cusub?
Bilo aad u yar ayaa ka soo wareegtay markii si rasmi ah loo soo saaray iPhone 11, 11 Pro iyo 11 Pro Max, laakiin ...
Heerka cusub ee Bluetooth LE Audio wuxuu noo oggolaan doonaa inaan cod ugu dirno dhowr aalad isku mar
Bluetooth SIG waxay soo bandhigtay halbeegga cusub ee u oggolaan doona u wareejinta maqalka aalado kala duwan kordhinta tayada iyo yareynta isticmaalka
Kooxda Orab-B iyo Colgate waxay bilaabeen burush 'isku xiran'
Hal-abuurka ugu horreeya ee 'Oral-B' ee CES 2020 waa caday caqli badan, oo ku xidhan cadaygayaga iPhone-ka.
Sheekada xiisaha leh ee ka dambeysa midabka cagaaran ee iPhone 11 Pro
Tani waa sheekada xiisaha leh ee ka dambeysa midabka "habeenka cagaaran" ee iPhone 11 Pro iyo sida shirkad Jaban ah ay si ficil ah ugu noolaato.